Manuel Neuer oo fariin u diray Liverpool, kahor is aragooda wareega 16-ka Champions League – Gool FM
Manuel Neuer oo fariin u diray Liverpool, kahor is aragooda wareega 16-ka Champions League
Dajiye December 18, 2018
(Europe) 18 Dis 2018. . Goolhayaha reer Germany iyo kooxda Bayern Munich Manuel Neuer ayaa fariin u diray kooxda Liverpool, kadib isku aadka wareega 16-ka tartanka Champions League ee shalay lagu sameeyay magaalada neon ee dalka Switzerland.
Isku aadka wareega 16-ka tartanka Champions League ee shalay la sameeyay ayaa waxaa kasoo baxay kulamo aad u adag ay ugu muhiimsan yihiin Bayern Munich vs Liverpool, Paris Saint-Germain vs Manchester United iyo sidoo kale Juventus vs Atlético Madrid.
Goolhayaha Jarmalka ayaa ka hadlay kulanka dhex mari doono kooxaha Bayern Munich vs Liverpool, isagoo sheegay in kooxdiisa ay si wanaagsan kaga warqabto awoodda Reds iyo awooda weerarkeeda, balse wuxuu aaminsan yahay inay jirto meelo kale ay ka daciifsan yihiin.
“Liverpool waxay ku jirtaa xili ciyaareed fiican, waxaan ka war qabnaa inay gaareen finalka Champions League xilli ciyaareedkii hore, xaqiiqdii kuma farxi doonaan kulanka ay nala ciyaari doonaan, sababtoo ah waxay ka war qabaan inaan qeyb ka nahay kooxaha u tartamaya ku guuleysiga Champions League”.
“Liverpool waa koox leh xawaare xoogan, waxayna halis ku yihiin afaafka hore ee goolka, laakiin sidoo kale waxay halis ugu jiraan siyaabo badan, sida aynu aragnay dhowr jeer”.
“Waxay wajihi doonaan weerarka xoogan ee kooxda Bayern Munich, sidaas darteed waxaan sugi doonaa labada kulan ka dhici doono garoomada Anfield iyo Allianz Arena”.
Macalinka Lyon oo sheegay in ay u diyaar garoobaan 150% si ay kaga adkaadaan koooxda Barcelona
PSG oo si rasmi ah u go’aamisay mustaqbalka laacibkeeda khadka dhexe Adrien Rabiot